Accueil > Gazetin'ny nosy > INTY SY NDAY: Halatra no ataon’ny Hvm
INTY SY NDAY: Halatra no ataon’ny Hvm
Riba maloto sady ratsy navelan’ny fitondrana nifandimby teto (Pisodia, Arema, Undd, Avi, Tim) ny manararaotra ny fahefam-panjakana sy ny volam-panjakana ary ny fitaovam-panjakana mbamin’ny mpiasam-panjakana hanitarana ny ambaindain’ny antokon’ny mpitondra fanjakana. Azo adika mivantana hoe “halatra” izany.
Misy mihitsy mantsy ny famoronana anton-dia sy famitana iraka (mission) any amin’ny faritra mba hahafahana manatanteraka an’izany halatra pôlitika izany. Matetika aza dia tsy misy akory ilay raharaham-panjakana nambara fa anton-dia fa ny asan’ny antoko no ifantohana. Izany no isan’ny nitoloman’ny vahoaka hatramin’ny 1971-1972-1991-2002-2009… mba hitsaharan’io fampiasana ny fahefam-panjakana ho amin’ny tombontsoa pôlitika maloton’ny mpitondra io.
Mandrak’ankehitriny anefa dia manao amboa ditsoka aoka izany ny manam-pahefana ara-panjakana hanara-davahana sy hanohy ary hanamafy an’izany fampifangaroana ny raharaha pôlitika amin’ny fitantanana ny raharaham-panjakana izany (politisation de l’administration).
Tsaroana mihitsy, ohatra, ny nampiasan’ny Arema ny mpampianatra teto tamin’ny alalan’ny Serema. Ny Undd dia nampiaiky volana ny maro ny nafitsoka ny minisitra Fanony Fulgence tamin’ny “Undd-isation” teo anivon’ny fampianarana. Ny Tim aza moa dia nahavatra nanangana mihitsy ny hoe “Tim Fanabeazana” sy “Tim Fahasalamana”, sy ny hafa e!
Tamin’ny faran’ny herinandro teo dia nirehaka aoka izany ny filohan’ny Antenimierandoholona, Rivo Rakotovao, fa hoe nirahin’ny fiolohampirenena hisolo tena azy amin’ny fitsidiham-paritra sy fanasan’ny any atsimon’ny Nosy azy (Androy sy Anosy). Dia nitarika tompon’andraiki-panjakana maro tany tokoa Ingahy Rakotovao Rivo. Ny tena anton-dia ara-panjakana aloha dia resaka fitokanana zava-bita (???) fa ny tena natatatata tao amin’ny haino aman-jerim-panjakana nanomboka ny sabotsy maraina teo, dia ny lanonana nokarakarain’ny antoko Hvm. Tao ny hoe “fifampiarahabana noho ny taona vaovao”, fa tao koa ny fananganana ny rafitra ny Hvm tany an-toerana.
Dia nampiasain-dry Rivo Rakotovao tamin’izany ny fahefam-panjakana sy ny fitaovam-panjakana mbamin’ny volam-panjakana izay nambara fa nanirahan’ny filohampirenena azy.
Dia hilaza inona indray i Rivo Rakotovao amin’izany? Hanao angoan-tenda hanamarin-tena hoe “izany no tena fanaovana pôlitika?” Halatra izany na inona hambara na inona holazaina e!
Miezaka manentana ny vahoaka amin’ny fandemena ny sainy mba hifikitra amin-dRajaonarimampianina ny Hvm sy ny olom-boafidy manaiky hovozonany na ireo ataon’ny Hvm ho eo ambany vahohony. Tsy olana izany satria isan’ny asan’ny antoko, fa ny fanararaotana ny fahefam-panjakana hanaovana an’izany no tsy ara-dalàna. Dia misy ny milaza hoe “hatramin’izay naha-Madagasikara an’i Madagasikara dia ny filoha Rajaonarimampianina ihany no mba nijery ny ho fampandrosoana ny Faritra Atsimo”.
Isan’ireo solontenam-panjakana niara-dia tamin’izao fandehanana tany amin’ny faritra atsimon’ny Nosy izao ny minisitra ny Fifandraisana, Harry Laurent Rahajason. Izy izay nanararaotra nanao fampielezan-kevitra koa fa “hovatsiana fitaovana avokoa ny faritra rehetra manerana ny Nosy mba ho afaka manaraka tsy misy olana ny haino aman-jerim-panjakana (Rnm-Tvm).” Angaha moa tsy zon’ny vahoaka ny hahazo izany haino aman-jeerim-panjakana izany, ary moa tsy adidy aman’andraikitra ny fanjakana ny miantoka ny fampahombiazana izany no ndeha hanokanana hetsika iray manokana ny hizahozahoana amin’izany?